Anyị Legit enweghị ike ịgabiga etu igwe anya magnetik ọhụrụ MAC si arụ ọrụ - Ịma Mma
Anyị Legit enweghị ike ịgabiga etu igwe anya magnetik ọhụrụ MAC si arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ị jụrụ anyị ụnyaahụ ka esi egbochi anya anya ka ọ ghara ịda n'ihu gị niile mgbe i tinyere ya, anyị gaara agwa gị ka ị wụnye ụfọdụ ihe na -agba mmiri anya ka ha wee nwute flakes ma mebie akpa n'otu oge. Ma ọ bụ ime anya gị mbụ wee hichaa ọgbaghara ahụ tupu ịga n'ihu na etemeete gị ndị ọzọ. Mana nke ahụ bụ tupu anyị achọpụta Shadows Spellbinder ọhụrụ nwere MAC, dị na maccosmetics.com ($ 22 ọ bụla) site na Ọktọba 20 ruo Disemba 1.
Akara etemeete nwere arụmọrụ dị elu, amaara maka ihe ọhụrụ na-agbanwe egwuregwu (ya na nso nso a jikọtara ya na tetrachromat ịmalite 24 ihe ọ bụla dị ka '' egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ), emesịa chọpụta ka esi emepụta onyunyo anya nke na-arapara ka ude mana na-adị ka ntụ. Edebela ụcha ndị ahụ na ebubo ha, ka Nicole Masson, osote onye isi oche nke M.A.C nke mmepe ngwaahịa na -akọwa. Nke ahụ pụtara na ọ bụghị naanị na ntụ ntụ na -arapara na ndọta na nkwakọ ngwaahịa (yabụ na ọ naghị awụpụ ma ọ bụ pụọ na ite ahụ), ọ na -araparakwa na mkpuchi gị nke ọma na obere obere ọdịda, Masson kwuru, na -enye gị uru niile. —Ịdị njupụta, ịba ụba, ngwụcha na -enweghị ntụpọ -nke ntụ ntụ na -adịchaghị mma. Ego ọzọ dị mma nke etemeete magnetized? Uzuzu ndị ahụ na-alaghachi azụ n'ụzọ dị mma ka ọ dị ọhụrụ, n'agbanyeghị ugboro ole ị jiri ahịhịa gị ma ọ bụ mkpịsị aka gị mebie ha. E kwuwerị, ọ bụ ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu.
Lelee n'okpuru wee tụgharịa olu gị ka ọ nụ ka o si arụ ọrụ:
Mana dị ka ọnwụnwa dị ka agba asatọ na-enwu enwu-cobalt acha anụnụ anụnụ, teal mara mma, olive na-ekpo ọkụ, emerald doro anya, amethyst miri emi, chocolate bara ụba, quartz anwụrụ ọkụ, na ọla ọla-nwere ike ịbụ, ha abụghị maka nkụda mmụọ, dọrọ aka ná ntị Gregory Arlt, onye isi nhazi nka. A na-atụ aro ka ha were ya dị ka ihe mkpuchi zuru oke, na-enweghị mgbagha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe na-arụ ọrụ nke ọma, nwaa iji ya mmiri dị ka liner ma ọ bụ gbaba n'ime ahịrị adịghị mma gị maka obere ụcha agba. Maka ihe ọ bụla ọzọ, buru ụzọ jiri ihe mbido mee ihe mbụ (ọ dị ka Velcro maka ndò ndị a, Arlt kwuru) wee gaa maka ya. Obere anya ọla nke na -adịgide dị ka nrọ? Nke ahụ bụ ọdịdị mara mma anyị nwere ike ịdata kpamkpam.
Hụ ihe si na Allure:
- Lipsticks gbara ọchịchịrị iri na asatọ ka ha yie ogologo oge niile
- Ndị na -ese ihe etemeete nke Foundation na -eji eme ka pores dị obere
- Nchacha etemeete etemeete nke Mario Dedivanovic fọrọ nke nta ka ọ dị nfe
miri emi v push up bra
ọ bụ ikuku ikuku dyson kwesịrị ya
kedu ihe mere justin bieber na selena gomez ji gbasaa